त्यो देश भन्दा यो देश राम्रो भन्ने देखाउन चाहाने लेखक भण्डारी
बुधबार, २८ कार्तिक, २०७५
करिब डेढ दशकयता पत्रकारिता क्षेत्रमा क्रियाशिल रोहित भण्डारी पछिल्लो समय प्रेरणादायी पुस्तक लेखकका रुपमा चिनिन्छन् ।
करिव डेढ दशकयता पत्रकारिता क्षेत्रमा क्रियाशिल रोहित भण्डारी पछिल्लो समय प्रेरणादायी पुस्तक लेखकका रुपमा चिनिन्छन् । पत्रकार भण्डारीको ‘सम्भव छ’ र ‘नेपालमै सकिन्छ’ नामक दुई पुस्तक यतिबेला चर्चामा छन् ।
यी पुस्तकका लागि नेपाल सरकारले पत्रकार भण्डारीलाई नगद एक लाख रुपैंयाँ राशीसहितको राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मान–२०७४ बाट समेत सम्मानित गरिसकेको छ । यतिबेला उनी तेस्रो पुस्तकको तयारीमा छन् । प्रस्तुत छ पुस्तककै सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर पत्रकार भण्डारीसँग सुम्निमा काफ्लेले गरेको कुराकानी :
तपाईँले पुस्तक लेखेरै नेपाल सरकारबाट राष्ट्रियस्तरको सम्मान पाउनुभयो । कस्तो महसुस भयो ?
असाध्यै खुसी भएँ । यो सम्मान जसलाई मैले म प्रतिको सम्मानका रुपमा मात्र नलिई पुस्तकमा समावेश सबै पात्र प्रतिको सम्मानका रुपमा लिएँ । सम्मानित भइरहँदा ‘सम्भव छ’ अभियानका व्यवस्थापक डिल्ली तुलाधरसहित ती पात्रहरुलाई सम्झिएँ । जसका संघर्ष र सफलताका कथा पुस्तकमा लेखेको छु ।
प्रेरणादायी व्यक्तिहरुका विषयमा लेखिएका पुस्तकका कारण सम्मानित हुन पाउँदा मलाई थप प्रेरणा मिलेको छ । हौसला मिलेको छ । लागेको छ, यस्ता पात्रहरु अझै खोज्नुपर्छ र उहाँहरुका विषयमा लेख्नुपर्छ ।
पुस्तकले यो स्तरको सम्मान दिलाउला भनेर कहिल्यै सोच्नु भएको थियो ?
थिइन । किनकि कुनै सम्मान र पुरस्कारको आशले मैले पुस्तक लेखेकै थिइन । म अरुको सम्मान गर्न चाहन्थेँ । कर्मवीरहरुको सम्मान । समाजमा सानातिना भनिने काम गरेर उदाहरणीय बनेका व्यक्तिहरुलाई पुस्तकमा राख्नु, उहाँँहरुका विषयमा लेख्नु उहाँहरु प्रतिको मेरो सम्मान भाव थियो । राष्ट्रपतिज्यूका हातबाट जब मैले राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मान पाएँ त्यसपछि लाग्यो— अरुको सम्मान गर्न जानियो भने आफ्नो सम्मान स्वतः हुने रहेछ ।
पत्रकारिता क्षेत्रमा रहँदा–रहँदै तपाईँले दुईवटा पुस्तक लेख्नुभयो । कसरी सम्भव भयो त्यो ?
म पत्रकारिता क्षेत्रमा थिइन भने पुस्तक लेखनको यो यात्रामा पनि हुने थिइन होला । पत्रकारिताकै दौरानमा मैले समाज पढ्ने र बुझ्ने अवसर पाएँ । वैदेशिक रोजगारीको डरलाग्दो तथ्यांकबारे यही क्रममा जानकार भएँ ।
पछिल्लो एक दशकको अवधीमा झण्डै २५ लाख नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएको तथ्यांकले मेरो मन असाध्यै घोच्यो । यत्तिका युवा किन देश छाडेर गए त ? मलाई लाग्यो, ती युवाले देश छोड्नुमा सरकार र तीनका निकायहरुको दोष जति छ हामी पत्रकारको दोष पनि त्यत्तिकै छ ।
समाजमा केही राम्रो काम गरेका, प्रतिकुल राजनीतिक सामाजिक अवस्थाका बीचमा पनि लोभ लाग्दो प्रगति गरेका मेहनती युवाहरुका समाचार र विचार हामीले हाम्रा सञ्चार माध्यमहरुमा प्रस्तुत गर्न सकेको भएपक्कै ती युवामा थोरै भए पनि आशाको किरण जाग्थ्यो । तर, हामीले त्यस्तो गरेनौं । बरु, यो छैन, त्यो छैन, यो भएन, त्यो भएन भन्ने नकारात्मक समाचार र विचार मात्र प्रस्तुत गर्‍यौं ।
त्यसैले, मैले सोचेँ, अब म त्यो भन्दा फरक धारबाट अघि बढ्छु । समाजमा केही गरेका, थोरै लगानीमा पनि राम्रो आम्दानी गर्न सफल भएका व्यक्तिहरुलाई उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत गर्छु, जसले नेपाली युवाहरुमा गरे हुने रहेछ भन्ने साकारात्मक भावना र आत्मविश्वास जागृत गराओस् ।
पुस्तक प्रकाशन भएपछिका केही सम्झन लायक क्षणहरु सुनाउनुस् न ?
त्यस्ता धेरै क्षणहरु छन् । पाठक प्रतिकृया मैले सोचे भन्दा धेरै आयो । थुप्रै फोन, म्यासेज आए, थुप्रै इमेल आए अनि कति पाठकहरु जो टाढा टाढादेखि प्रत्यक्ष भेट्नकै लागि म कहाँ आउनुभयो । अर्को कुरा मैले जो–जो पात्रहरुका विषयमा लेखेँ उहाँहरु सञ्चारमाध्यममा राम्रैसँग छाउनुभयो ।
पुस्तक के का लागि लेख्नुहुन्छ ? ब्यापार, सन्तुष्टि वा अन्य कारणहरु पनि छन् ?
व्यापार र सन्तुष्टी भन्दापनि नेपालमै केही गरौं, गर्नुपर्छ र गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश प्रवाहका लागि लेख्छु । उन्नति र प्रगतिका लागि यो देशभन्दा त्यो देश राम्रो भन्नेहरु प्रशस्तै छन् । तर, म त्यो देश भन्दा यो देश राम्रो भन्ने देखाउँन चाहन्छु ।
प्रायः कुन समयमा लेख्नुहुन्छ ?
समय त ठ्याक्कै यही भन्ने छैन । फुर्सद मिलेपछि लेख्न बस्छु ।
अन्य लेखकका पुस्तकहरु चाहिँ कत्तिको पढ्नुहुन्छ ?
धेरै पढ्ने पनि होइन, पढ्दै नपढ्ने पनि होइन । ठिकै पढ्छु । तर, धेरै चाहिँ म समाज पढ्न रुचाउँछु । समाजका त्यस्ता पात्रहरु जसका विषयमा लेखिएका छैनन् । जसका विषयमा बोलिएका छैनन् । तीपात्रहरु मेरो रोजाईमा पर्छन् । जोसँगको प्रत्यक्ष भेट र संवाद साँच्चै प्रेरणादायी लाग्छन् ।
तेस्रो पुस्तक लेख्ने सोच बनाउनु भएको त छैन ?
बनाएको छु । अहिले म तेस्रो पुस्तकको तयारीमा नै व्यस्त छु । पात्रहरु भेट्ने र लेख्ने काम गरिरहेको छु ।
कस्तो हुनेछ तपाईंको तेस्रो पुस्तक ?
यही समाजका प्रेरणादायी पात्रहरुकै सन्दर्भमा केन्द्रित छ । तर, अघिल्ला दुई पुस्तकभन्दा फरक प्रकारको छ । लेखनको धार प्रेरणादायी नै हो । तर, लेखनको विषयवस्तु र क्षेत्र फरक छ ।
प्रेरणादायी पुस्तक लेखनलाई अभियानकै रुपमा लैजाने सोच हो तपाईँको ?
हो । ‘सम्भव छ’ र ‘नेपालमै सकिन्छ’ अब सामान्य पुस्तकमात्रै होइन । तपाईले भने जस्तै यो एउटा अभियान हो । त्यही अभियानको निरन्तरता हो अबको पुस्तक पनि ।
तपाईँको पहिलो र दोस्रो पुस्तक जसले पढ्नुभएको छैन, उहाँहरुलाई भन्दिनोस् न कस्ता कस्ता पुस्तक हुन् यी ?
कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमीबाट माथि उठेका २३ जना संघर्षशील पात्रहरुको संघर्ष र सफलताको कथा हो – ‘सम्भव छ’ । जसका कथाले आर्थिक प्रगति र उन्नति मेरो हकमा पनि सम्भव छ भन्ने आत्मविश्वास जगाउँन मद्दत पु¥याउँछ ।
अनि नेपालमा केही हुँदैन, केही गर्न सकिदैन भन्ने निराशाका बीचमा नेपालमा के–के गर्न सकिन्छ ? भन्ने केही टिप्ससहित केही प्रेरक व्यक्ति र प्रेरक सन्दर्भ समेटेर लेखिएको पुस्तक हो– ‘नेपालमै सकिन्छ’ ।
राजेन्द्र वाग्ले लेख्नुहुन्छ २०७५ कार्तिक २९ बिहीबार ५:५६ pm
राम्रो छ / र अबसर को खोजी आफै बाट गर्ने को भने संदेश प्रभाह गरे को छ